March 2021 - Nepal Times Online
नेपालमा आजकल हरेक दिन नरा&म्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह’ त्या कहिले दे’ ह’ त्याग कहिले चोरी त कहिले लु’ट पा ट । सं क ट का ल सकिएपछि शान्त बनेको नेपालमा कहिलेकाही नसोचेको घ’टना सुन्नु पर्दा सबै नेपालीहरुलाई दुखी बनाउदै आएको छ । नवलपुरमा फेरि अर्को सोच्नै नस’किने घ’टना घ’टेको […]
बिछोड हुनु पनि जिन्दगीको अहम् हिस्सा हो। यसका यस्ता फाइदाहरु पनि छन्।
प्रेम सम्बन्धमा परेपछि अचानक सम्बन्ध टुट्नु अनि सबैकुरा एकैपटक सकिनु, यो कुनै ठुलो बज्रपात परे भन्दा कम हुँदैन। कोही-कोही मानिष त यो अवस्थामा यत्ति निराश हुन्छन् कि उनीहरूलाई लाग्छ, जीवनमा अब केही बाँकी छैन। तर सत्य यो हो कि ब्रेकअपका पनि आफ्नै फाइदाहरू छन्। यसले मान्छेलाइ पहिले भन्दा राम्रो मान्छे बनाउँछ। जान्नुहोस् कसरी … टुटेको […]
नामको पहिलो अक्षरबाट थाहा पाउनुस्, तपाईको स्वभाव र भविश्य कस्तो छ ? मिल्यो कि मिलेन आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
हामी तपाइँहरुलाई सधै प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौ । प्रेरक भनाईहरु, मनछुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ् साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरु माझ एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर […]
१० महिना देखि श्रीलंकाको जे-ल मा श्रीमती | डाका छोडेर रोए श्रीमान “कसैले साथ दिएन अब भेट हुन्न होला” । (भिडियो)
१० महिना देखि श्रीलंकाको जे-ल मा श्रीमती | डाका छोडेर रोए श्रीमान “कसैले साथ दिएन अब भेट हुन्न होला” । (भिडियो) पुरा भिडियो हेर्नुहोला भिडियो हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला यो पनि पढ्नुहोला । माया गर्ने आँट गरिसके पछी सम्बन्ध टिकाउने शाहस पनि राख्नुपर्दछ – मनछुने भनाईहरु १. रमाउने भनेको त बचपनमा मात्र रहेछ, जिम्मेवारीले […]